Sahara Andrefana: Sahraouis ao Kiobà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2018 3:04 GMT
Afaka hitia tany hay va re raha avy any Karaiba? ….Ny tany hay no endriky ny mponina tsirairay avy ao Sahara ary raha toa ianao tsy tia ny endrikao manokana, iza no mety ho tianao indray andro any? Santionany avy amin'ilay sarimihetsika Caribbean Sahara [esp]
Inona no voalohany tsapan'ny Arabo iray mpifindra toerana eo am-pahatogavana ao aminà nosy karibeana iray ? Zarain'ny bilaogera Ali Salem Iselmu ny zavatra niainany nandritra ny fitsidihany, ao anaty tantara iray mahafinaritra mitondra lohateny hoe “Arabo iray mpifindra toerana tonga ao Karaiba” [esp]:
Alina taminì'izay ary azo natao ny nanavaka tao anaty haizina ny vohitra kely iray mahafinaritra feno trano vita tamin'ny hazo mena sy fotsy. Tonga tamin'ny faratampony ny rivotry ny fety sy haravoana: nandihy ny olona ary niaina nanaraka ny gadon'ny mozika nalefa mafy dia mafy. Tena refona tanteraka izahay saingy tsy nanana safidy hafa afa-tsy ny nanatevina laharana ireo fety.
Teo am-pidinana ny fiara fitaterana, rehefa tonga tao amin'ny Plaza de Banes, ny masonay no nahita ny fahamarinan'ilay ohabolana manao hoe : “Boaty vy iray sy tapakazo iray dia ampy ho an'ny Karibeana handihizany”. Marina fa ny natiora sy ny fanahy karibeana dia tsy mitovy amin'ny fahatsorana sy fahalalàna onona izay manamarika ireo arabo mpifindra toerana, izay lasa ho azy ho karibeana noho ny gadon'ilay alina mandomando.
Tafiditra ho anatin'ireo ohatra voalohany amin'ny resaka fifanohanana iraisampirenena ny fiarahana miasa misy eo amin'i Kiobà sy Sahara. Ohatra, tany amin'ny andian-taona 70, 99 ireo tovovavy voafantina hisitraka ny fandaharanasa iray momba ny fampianarana sy fanatsarana ny andavanandrom-piainana, tamin'ny alàlan'ny fianarana tany Kiobà, araka ny hazavain'i Hernan Zin ao anatin'ny “Ireo vehivavy avy any Sahara” [esp]. Iray tamin'ireny tovovavy ireny i Maima Mahamud de Dajla:
Nandany ny fahazazany sy ny fahatanoràny tao amin'ny nosy karaibeana tao Kiobà izy, toerana nianarany, nanomanany ny hoaviny niaraka tamin'ny hevitra iray masaka tao an-tsainy, hiverina any Sahara rehefa lehibe ary hitolona ho an'ny fahafahan'ireo nàmany.
Avy eo, niverina tany amin'ny niaviany izy, nahazo tanjaka avy amin'ny fanabeazana azony ary nanangana ny sekoly ho an'ireo vehivavy tao Dajla mba hanatsaràna ny fanabeazana sy hampitomboana ny fahafahamanao ho an'ireo tovovavy ao amin'ny fireneny. Io asa miavaka io, notohanan'ireo vehivavy nahita fianarana, toy ny porofoin'ity tatitra farany ity (fr) avy amin'ny UNESCO, dia mametraka ireo otrikarena rehetran'ilay firenena ao Amerika Latina, izay avo dia avo ny fenitra rehetra amin'ny resaka fanabeazana, mba hamotehana ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra mahazo ny 50% amin'ny vahoaka ao Sahara Andrefana.
Mitohy ny fiarahamiasan'ny tany roa tonta na eo aza ny toedraharaha misy ankehitriny ao amin'ilay nosy, araka ny asehon'ny bilaogera El Porvenir del Sahara miaraka amin'ireo saripikany ahitana ireo Saharaouis [esp] eo am-pisotroana dite ao Kiobà, na ireo Kiobàna nandihy tany Sahara Andrefana. Ebnu, bilaogera iray hafa, mizara ny zavatra niainany nandritra ny diany tany Argel, ao Kiobà, fony izy mbola ankizy, amin'ny fitondràna antsika hiverina any amin'ny taona 1978 [esp], nahatongavany tao Karaiba.
Tsaroako ireo andro voalohany nahatongavana tao Kiobà niaraka tamin'ny fihetsehampo nifamahofahoan'ny alahelo sy ny lonilony, fa koa ny fisalasalàna sy ny fahalianana nanoloana ireo zavatra vaovao niainana izay sambany vao nanomboka. Tontolo iray vaovao feno fanantenana sy zavatra tsy ampoizina.
Manga, goavy, sapotes mamey [ang].. Matsiro anie izany! Ny “ball”, ny baseball, fomba ahoana no ahafahana milalao io karazana fanatanjahantena io ? Mba fantatr'izy ireo ve ny atao hoe baolina kitra ? Ny elanelana misy amin'ny masira sy mamy. Diso mamy loatra ireo sakafo mamy ary toy izany koa ireo sakafo masira. Dia avy eo, ahoana no ihinanan'ny olona vary isanandro, isaky ny fotoana fisakafoanana ? Indrindra fa izaho izay tsy tia vary…
Raha maniry hahita sarimihetsika iray momba io resaka io ianao, torohevitra avy amin'ireo bilaogera ny Caribbean of the Sahara (Ireo Karibeana ao Sahara) [esp]. Raha indray andro any ianao mifanehatra amin'ny arabo iray mpifindra toerana mandihy amin'ny gadona Kiobàna no sady manolotra kaopin-dite telo ho anao, dia efa fantatrao izao ny antony.